« Raharaha Ambohitrimanjaka »: ahina ny ain’ilay zandary, Basy iray tsy hita | NewsMada
Ahina mafy ny ain’ilay zandary naratra mafy nandritra ny fifandonana teny Ambohitrimanjaka, ny alakamisy teo. Very koa anefa ny basy iray nandritra ny fifandonana ary tafakatra folo ireo voasambotra.
Very ny basy iray nampiasaina zandary teny an-toerana nanoloana ny savorovoro niseho, ny alakamisy teo. Mbola ahina mafy ihany koa anefa ny ain’ilay zandary naratra mafy vokatry ny herisetra nahazo azy. Voalaza fa tsy mahatsiaro tena izy io, hatramin’izao ary miady amin’ny fahafatesana ao amin’ny HJRA. Manoloana izany, hentitra ny Sekreteram-panjakana miadidy ny zandarimaria (Seg), ny Jly Ravalomanana Richard, omaly, nandritra ny fanambarany momba iny raharaha iny. “Ny basinay iray very nefa ny tsy fandriam-pahalemana mbola ahina. Avereno malaky ny basinay fa hatolotray ny Fitsarana ary haterinay any Tsiafahy ny olona hahatraranay an’izay. Tsy hanaiky izany mora foana izahay” hoy izy teny Betongolo. Nambarany fa mbola mahazo tsiny ihany ny zandary momba ny zava-niseho tamin’iny fotoana iny. Tafiditra ambadika politika ny raharaha. “Natao hitandro ny fandriam-pahalemana sy ny filaminana ny antom-pisian’ny zandary. Mbola hosamborinay na firy na firy ireo nanao herisetra tamin’ny zandary” hoy ihany izy. Niisa roa ny zandary taraiky tao anaty vahoaka niharan’ny hatezeran’ireo mpanao fihetsiketsehana ka naratra mafy tamin’io fotoana io. “Nanaovana herisetra ny zandary fa tsy nanao herisetra” hoy ihany ny Seg.
Atsaharo ny fanararaotana politika
Nanamafy koa ny tenany fa tsy voatifitry ny bala velively, araka ny feo miely sy voizin’ny olona any amin’ny tambajotran-tserasera ilay olona iray naratra ary notsaboina. “Nitsambikina avy teny ambony tamboho io lehilahy io ka nitarika ny faharatrany izany”, hoy ny Jly Ravalomanana.
Tafakatra folo ireo voasambotra hatreto, omaly ny iray farany. Hatolotra ny Fitsarana izy ireo. Manoloana ny tranga rehetra miseho, manao antso avo ny Jly Ravalomanana Richard. “Ajanony ny fanararaotana politika ataon’ny hafa momba ity raharaha ity”, hoy izy.